Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseSt. Eustatius Breaking » ISt
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Ukubambisa • iindaba • abantu • Iindaba zeSint Maarten eziQhekezayo • Iindaba zaseSt. Eustatius Breaking • Iindaba zaseSt • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel
M / V Makana weBlues kunye neBlues Ltd. ovela eAnguilla.
Isikhephe iMakana siqala uhambo oluya phakathi kweziqithi phakathi kweStatia, Saba kunye neSint Maarten ngo-Novemba 1, 2021.
IBlues kunye neBlues Ltd yaseAnguilla iphumelele ithenda yokunxibelelana phakathi kolwandle kunye neM / V Makana.
IMakana yinqanawa engama-72 intshi iSaber catamaran, ekwaziyo ukuthwala abakhweli abali-150 kwiidesika ezimbini.
Amalungiselelo eqela eliphakathi kweziqithi aqhubeka ngokupheleleyo ukuze akwazi ukuhlangabezana nomhla wokumiliselwa.
I-Blues kunye neBlues Ltd. yeAnguilla icwangciselwe ukuqala ngohambo oluphakathi kwesiqithi phakathi kweStatia, Saba kunye neSint Maarten ngoNovemba 1, 2021. Amalungiselelo eqela eliphakathi kweziqithi aqhubeka ngokupheleleyo ukuze akwazi ukuhlangabezana nalo mhla. Ingcaciso ngexabiso lokuhamba kunye neshedyuli ngqo yolwazi iya kulandela kungekudala.
IBlues kunye neBlues Ltd yaseAnguilla iphumelele ithenda yokunxibelelana phakathi kolwandle kunye neM / V Makana. IMakana yinqanawa engama-72 intshi iSaber catamaran, ekwaziyo ukuthwala abakhweli abali-150 kwiidesika ezimbini. Kukho indawo esezantsi, indawo ephezulu (evulekileyo) yelanga kunye nomgangatho ophezulu weshishini. Umgangatho osezantsi kunye nomgangatho ophezulu zombini zinomoya opheleleyo kwaye zinezindlu zangasese ezimbini kunye nebha.
IMakana iya kubonelela ngemithwalo eyaneleyo kunye nokusebenza kwempahla. I-catamaran iza kuhamba kamnandi ngesantya esisebenzayo samaqhina angama-23 ngesantya esiphezulu sama-31knots. Iihambo ziya kuba malunga nemizuzu engama-45 ukusuka eSaba ukuya IStatia, Imizuzu engama-75 ukusuka eSaba ukuya St. Maarten nemizuzu engama-85 ukusuka IStatia ukuba St. Maarten. Ngenxa yezithintelo ze-COVID-19 eSt. Kitts, indlela eya kwesi siqithi ayinakucwangciswa okwangoku kude kufike esinye isaziso.
IMakana ligama lesiHawaii elithetha “Isipho”. IBlues & Blues Ltd. yamkele inqanawa kwizithuthi zayo kutsha nje. Abakhweli banokulindela inkonzo enobuhlobo nethembekileyo egcwaliswe nge-WiFi kunye neenkonzo zabathengi abakwi-Intanethi. IMakana iya kuhlala eStatia okanye eSaba. Abahlali bayakhuthazwa ukuba benze izicelo zezikhundla ezingenabantu njengamalungu abasebenzi.
USamuel Connor, umnini weBlues and Blues Ltd., uthe: “Sishishini losapho. Sikholelwa ngamandla ekubeni singanegalelo kuphuhliso lwezentlalo noqoqosho lweziqithi ngokusebenzisa unxibelelwano lwaselwandle oluquka iSt. Barth, iAnguilla neNevis ”.